Dagaal Qadhaadh Oo Maalintii Sadexaad Ka Socda Magaalada Gaalkacayo, Khasaaraha Ka Dhashay Iyo Dhinayada Dagaalku U Dhexeeyo | Araweelo News Network (Archive) -
Dagaal Qadhaadh Oo Maalintii Sadexaad Ka Socda Magaalada Gaalkacayo, Khasaaraha Ka Dhashay Iyo Dhinayada Dagaalku U Dhexeeyo
Gaalkacayo(ANN)Woqooyiga Magaalada Gaalkacayo waxaa maalintii labaad ka dhacay dagaal xoogan, kuwaas oo u dhexeeya ciidanka maamulka Puntland iyo koox hubaysan oo ay ku sheegeen Maamulka Puntland inay dagaal kula jiraan koox argagixiso ah, ayna sii wadi doonaan. Hase yeeshee
mid ka mid ah odayaasha dhaqanka ee Puntland ayaa ku gacan seydhay hadalka maamulka Puntland. Wuxuuna meesha ka saaray inay koox argagixiso ah yihiin kuwa dagaalamayaa.
Dagaalka ka socda magaalada Gaalkacayo waxa uu xooggiisu ka dhacay maanta xaafadda Garsoor oo ku taala dhinaca Woqooyi, waxaana lagu soo warramaya inay maanta dagaalka ka qeyb qaateen ciidamo ka tirsan maamulka Puntland oo taangiyo ku hubeysnaa. Ilaa 30 qof oo labada dhinac ah ayaa la sheegay inay labada dhinacba ka dhinteen, isla markaana tirooyin intaa ka baddan oo dhaawacyo soo gaadheen. Sarkaal u hadlay Wasaaradda Arrimaha Gudaha Puntland ayaa qiray inay jjiraan dhimasho iyo dhaawacba. Waxaana la sheegay inay Cusbitaalada la keenay dhaawacyo fara baddan, balse aan la shaacin tirade saxda ah.
Afhayeenka nabadoonada Puntland, Cabdicasiis Maxamuud Yuusuf (Af-guduud) oo u warramay warbaahinta ayaa ayaa dhaliilay dagaalkaasi. Wuxuuna ku baaqay in arrinta wadahadal loo bedelo oo meesha laga saaro gacan ka hadalka.
Si kastaba ha ahaatee dagaalkan ka socda magaalada Gaalkacayo ayaa ku soo beegmaya xilli ay magaalada Gaalkacayo ay ka dhacayeen dilal qorsheysanaa oo ay Puntland marar badan ku eedeysay inay ka dambeyso argagixiso.
Inkasa oo Maamulka Puntalnd uu sheegay in dagaalkan ay ku qaadeen koox argagixiso ah oo al-Shabaab ka tirsan, haddana marka la eego jawaabaha ka imanaya dhinacyo kala duwan, dagaalku waxa uu u muuqdaa inuu yeelanayo weji qabiil, taas oo sii kicin karta xiisado beeleed oo mudooyinkii u danbeeyay ka aloosnaa magaalada Gaalkacayo